हरिबोधिनी एकादशी - कार्तिक शुक्लपक्ष एकादशी - तुलसी विवाह - नेपाली पात्रो
नेपाली पात्रो > चाडपर्व > हरिबोधिनी एकादशी
कार्तिक शुक्लपक्षको एकादशी तिथिलाई हरिबोधिनी एकादशी भनिन्छ। ‘हरि’ भन्नाले भन्नाले भगवान् विष्णुलाई बुझिन्छ भने ‘बुध्’ धातुबाट बनेको ‘बोधिनी’ शब्दले निद्राबाट जागा हुने भन्ने जनाउँछ। पुराण एवं धर्मशास्त्रमा उल्लेख भएअनुसार भगवान् श्रीहरि आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि चार महिनासम्म क्षीरसागरमा शेषनागरूपी शय्यामा विश्राम गर्नुहुन्छ, भाद्र शुक्ल एकादशीमा दायाँतर्फ कोल्टो फर्किनुहुन्छ र आजकै दिन जाग्नुहुन्छ।
हरिबोधिनी एकादशी प्रसंग
भगवान् श्रीहरि शयन गर्नुहुने तिथिलाई हरिशयनी एकादशी भनिन्छ भने कोल्टो फेर्ने तिथिलाई हरिपरिवर्तिनी एकादशी र शयनावस्थाबाट जागा हुने आजको तिथिलाई हरिबोधिनी एकादशी भनेर धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। भगवानको जाग्ने दिन भएकाले हरिबोधिनी एकादशी वा हरिप्रबोधिनी एकादशी भनिएको हो। भगवानका विशेष क्षणहरू परं कल्याणदायी मानिन्छन्। इतिहास, पुराण एवं धर्मशास्त्रहरूमा भगवानको शयन, परिवर्तन र जागरण हुने समयलाई उत्सवका रूपमा मनाउन निर्देश गरेको पाइन्छ। यसर्थ एकादशी तिथिलाई भगवान् विष्णुको उपासना गर्ने महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा लिने गरिन्छ।
भगवानको शयन अवस्थामा लोक नै सुत्ने हुनाले विशेष माङ्गलिक कार्यहरू, विवाह, व्रतबन्ध, चूडाकर्म, वरपीपलको विवाह, गृहनिर्माणलगायत कृत्यहरू भने गरिँदैनन्। भगवानको शयन अवस्थामा गरेका कार्यहरूमा भगवानको दृष्टि नपर्ने हुँदा शुभफल पाइँदैन। यसर्थ यो समयमा शुभकर्म गर्न निषेध गरिएको हो। यो समयका लागि पात्रोमा पनि यस्ता कृत्यहरूको शुभसाइत राखेको पाइँदैन। नित्य, नैमित्तिक कर्म भने यस चतुर्मासभित्र पनि गर्न हुन्छ, दोष लाग्दैन। आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिकशुक्ल एकादशीसम्म भगवानको शयनावस्था रहने भएकाले कार्तिक शुक्ल द्वादशीका दिन भगवानलाई जगाउने शास्त्रोक्त विधान रहेको छ। चतुर्मासभरि शयन गर्नुभएका भगवान् श्रीहरिलाई कार्तिक शुक्ल द्वादशीमा यस मन्त्रद्वारा जगाउनुपर्दछ ।
(हे गोविन्द भगवान्, हजुरले निद्रा छोडेर अठ्नुपर्यो किनकि हजुरको सुताइमा संसारै सुत्छ र हजुर जागा हुँदा यो चराचर जगत्, ब्रह्माण्ड नै उठ्छ। अतः जगतलाई जगाउन हजुर जागा हुनुपर्यो।)
कार्तिकमा भगवान् जागा भएपछि सर्वप्रथम दामोदर भगवानसँग भगवती तुलसीको विवाह गर्ने विधान छ। सम्भव भए कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथिमा र सम्भव नभए वा बाधा परे त्यसपछि दामोदर–तुलसी विवाह गर्नुपर्दछ।
एकादशी व्रतको महत्त्व
आषाढ शुक्लपक्षको एकादशीदेखि चातुर्मास्य व्रत प्रारम्भ गरिन्छ भने कार्तिक शुक्लपक्षको एकादशी व्रत सम्पन्न भएपछि विधिपूर्वक पारण गरी उक्त व्रत समापन गरिन्छ। यस बीचमा पर्ने अन्य एकादशीभन्दा शयनी र बोधिनी एकादशीको विशेष महत्त्व बताइएको छ। वर्षभरिका एकादशीमध्ये अत्यन्त पुण्यफलदायी हुने भएकाले यी दुई एकादशीलाई ठूलीएकादशी पनि भन्दछन्। एकादशी महात्म्यका साथै एकादशीमा व्रतीले पालना गर्ने विधिविधान’bout ब्रह्मवैवर्त पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। एकादशी व्रतमा निराहार उपवासलाई उत्तम मानिएको छ। तर कन्दमूल, फल, फूल, तिल, दूध, दही, मोही, पानी, घिउ आदि खाएर पनि व्रत–उपवास गर्न सकिन्छ। एकादशी व्रतमा अन्न भोजन भने निषेध गरिएको छ। शास्त्रवचनअनुसार सबै पापहरू एकादशीका दिन अन्नमा गएर बसेका हुन्छन्। व्रत बस्दा मुख्यरूपले शारीरिक अवस्था विचार गर्नुपर्दछ। यसर्थ बेलुकीको हविष्यान्न भोजनलाई पनि एकादशीमा निषेध परिपालनाकै रूपमा लिने गरिन्छ।
एकादशी व्रतले मन, वचन र कर्मको एकाकार गरी आफ्नो कर्तव्यमा सबल भएर अगाडि बढ्न सिकाउँछ। चतुर्मासभरि वा प्रत्येक एकादशीमा व्रत बस्नाले आत्मसंयम तथा दृढनिश्चयी भावको विकास हुनुका साथै शारीरिक एवं मानसिक स्फूर्ति बढाउने प्रेरणा प्राप्त हुन्छ। त्यसैले एकादशीको व्रत सधैंका लागि र सबैका लागि लिनुपर्ने भनी निश्चय गरिएको हो।
मानिसका प्रत्येक इन्द्रियको सम्बन्ध मनसँग जोडिएको हुन्छ। इन्द्रियहरूमा विषयभोगको लालसा हुन्छ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इन्द्रियका विषयभोग हुन्। विषयभोगको प्राप्ति कान, छाला, आँखा, जिब्रो, नाकजस्ता इन्द्रियले चाहेर मात्रै हुँदैन, मनले नै चाहनुपर्दछ। इन्द्रियको विषयातुर वृत्तिलाई नियन्त्रणमा राख्ने काम पनि मनले नै गर्दछ। यसर्थ सफा मन र विकाररहित इन्द्रियको एकाकार वृत्तिले मात्र कुनै पनि कार्यलाई सफल बनाउन सकिन्छ। यस प्रकारको सफलतामा एकादशी आदि व्रतहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। एकादश इन्द्रियहरूको संयम वा नियन्त्रण नै एकादशी व्रतको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।
आँखा, कान, नाक, जिब्रो र छाला यी ५ ज्ञानेन्द्रिय हुन् भने वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ यी ५ कर्मेन्द्रिय हुन्। यी १० इन्द्रिय र मन समेत गरी ११ वटा इन्द्रियहरूको वृत्ति अर्थात् चालचलन एवं विषयवासनाप्रतिको आशक्तिलाई रोक्ने काम एकादशी व्रतले गरेको हुन्छ। एकादश इन्द्रियको नकारात्मक वृत्तिलाई रोक्नु नै एकादशी व्रत लिनुको तात्पर्य हो। अतः एकादशी व्रतले इन्द्रिय संयममा राख्न सिकाउनुका साथै एकाग्र भएर कार्यक्षेत्रमा अघि बढ्न सिकाउँछ।
हरिप्रबोधिनी एकादशीपछि जब भगवान् विष्णु जागा हुनुहुन्छ, त्यसपछि चार महिनाअघि रोपेर पूजा गरिएकी तुलसीको विधिपूर्वक दामोदर भगवानसँग विवाह गरिन्छ। एकादशी व्रतको पारण गर्ने दिन अर्थात् द्वादशी तिथिमा तुलसीको विवाह गरिन्छ। तुलसीलाई नित्यपूजापछि दामोदर भगवान् वा सत्यनारायणको पूजा गरी तुलसी र दामोदर भगवानको विशेष पूजार्चना गरेर दामोदर भगवानको हातमा तुलसीलाई अर्पण गरिन्छ। छोरीको कन्यादान गरेजस्तै तुलसीको हात कल्पना गरेर दामोदर भगवानका हातमा दिनुपर्दछ। भगवानलाई तुलसी समर्पण गर्ने मन्त्र यसप्रकार रहेको छ–
अर्थात् सुवर्ण आदि अलङ्कारले सुसज्जित बनाएर नाना गरगहना तथा वस्त्र, आभूषणले युक्त भएकी यस्ती तुलसीरूपी कन्यालाई दामोदर अर्थात् विष्णुरूपी हजुर वरसमक्ष समर्पण गर्दै छु
‘आजसम्म तुलसीरूपी यी कन्यालाई रोपेर, हुर्काएर, बढाएर आज यथाशक्ति अलङ्कृत गरेर दामोदररूप तपाईंलाई दिँदै छु’ भनेर भगवान् सत्यनारायणका अगाडि हातमा संकल्प लिएको जल छोड्नुपर्छ र भगवान् विष्णु प्रसन्न हुनुहोस् भन्नुपर्छ। यी मैले दिएकी तुलसीरूपी कन्या ग्रहण गर्नुहोस् भन्नुपर्दछ। तुलसीको हात सम्झिएर विष्णुमा स्पर्श गराउनुपर्छ। यो तुलसी दान गरेकाले मैले मोक्ष पाऊँ र तपाईं तुलसी मेरा चारैतिर हुनुहोस् भनी प्रार्थना गर्नुपर्दछ।
यसपछि १०८ हवनआदि गरेर दक्षिणा दान गर्नुपर्छ।
नवान्नप्राशन, धात्रीपूजन तथा वनभोज
यसै हरिप्रबोधिनी द्वादशीका दिन नै नयाँ चामल भगवानलाई अर्पण गरेर न्वाँगी खाने परंपरा छ। वस्तुतः नयाँ धान, जौ आदिको उत्पत्तिपछि घरमा भित्र्याएर देवता, पितृहरूलाई अर्पण गरेर हवन गरी ‘आजदेखि प्रसादरूपमा यो अन्न ग्रहण गर्दछु’ भनी नवान्न ग्रहण गर्ने विधिलाई आग्रायण कृत्य भनिन्छ। अपभ्रंश हुँदै नयाँ अन्न ग्रहण (नवान्न) लाई न्वाँगी भन्न थालिएको हो। द्वादशीदेखि पञ्चमीसम्म तुलसीको हवन, तुलसीको विवाह र नवान्न प्राशनका लागि शुभसाइत हेर्नु नपर्ने हुँदा यी कर्महरू एकसाथ गर्ने गरिएको हो। मार्ग कृष्णपक्षको पञ्चमीपछि दिन जुराएर मात्र यी कर्महरू गर्न मिल्ने हुन्छ।
यसका साथै यस प्रबोधिनी एकादशीपछि वा एकादशीकै दिन पनि अमलाका फेदमा दामोदर भगवानको पूजा–आराधना गरेर पुरुषसूक्तले षोडशोपचार विधिले पूजा गर्ने र अर्घ्य दिनुपर्छ। अर्घ्य दिने मन्त्र–
दामोदरलाई यो मन्त्रले अर्घ्य दिएपछि क्षमापन गरेर धात्री अर्थात् अमलालाई चन्दन, कुंकुम आदिले पूजा गर्ने र फूलले पनि ‘ॐ धात्र्यै नमः…’ इत्यादि २० वटा मन्त्रले पूजा गरी सव्यले तर्पण गर्ने विधान छ।
यसपछि यो मन्त्रले अमलाको बोटमा धागो बाँध्नुपर्छ–
‘ॐ धात्र्यै नमः…’ भन्ने मन्त्रले चारतिर दही–अक्षताको वलि दिएर आठवटै दिशामा बत्ती बाल्नुपर्दछ। यसपछि प्रदक्षिणा गरेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ।
यसरी प्रार्थना गरेपछि घिउले भरिएको सुनले युक्त भएको कांस्यपात्र दान गर्नुपर्दछ। यसपछि यसै अमलाका फेदमा भोजन पकाएर खानुपर्दछ। यसलाई आजकाल वनभोज भनिन्छ।
अमलाका फेदमा दामोदर र धात्री अर्थात् अमलाको पूजा गरेर अर्घ्य आदि दिएर धन–सम्पत्ति, आरोग्य आदिको प्राप्तिका लागि प्रार्थना गरेर त्यहीँ भोजन बनाएर खाने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। यसैको अपभ्रंश गरेर वनभोज खान जाने परम्परामा परिणत भएको हो। मूल कुरा अमलाको फेदमा भोजन गर्ने शास्त्रीय मान्यता हो भने अहिलेको सन्दर्भमा वनभोज कार्यक्रम मात्र हुन थालेको पाइन्छ।
यसरी हरिबोधिनी एकादशीसँग जोडिएर आएका प्रसंगहरूमा एकादशी व्रतको चार महिना, तुलसीको विवाह प्रसंग, नवान्नप्राशनको धार्मिक पक्ष, धात्रीमूलमा दामोदर र धात्रीको पूजन, तर्पण एवं वनभोजको प्रसंग जोडिएको पाइन्छ।
नोभेम्बर 9, 20192वर्षहरु
dherai ramro sandes
नोभेम्बर 12, 20192वर्षहरु
जानकारीको लागि हार्दिक धन्यवाद
जनवरी 25, 20202वर्षहरु
नोभेम्बर 25, 2020 10 महिनाहरु
यस्तैप्रकारका बिभिन्न चाड पर्व को बिषय मा लेख रचना उल्लेख गर्ने गर्नु भएको माधेरै धेरैधन्यवाद
यो लेख ले राम्रो जानाकरी पायर खुशी लाग्यो
स्मार्तानाम र वैष्णवानाम एकादशी भनेर २ दिन नै एकादशी ब्रत उल्लेख भएको छ । यसको अर्थ के हो ? बुझिने गरी प्रष्ट पार्न अनुरोध छ ।
नोभेम्बर 26, 2020 10 महिनाहरु
Information for Thank.
Information for thanks.
अगस्ट 8, 2021 1 महिना
Guru dev dhog gare malai auta questions le ali aftharo vayo tulsi kanyadan ko lagi chumasik batra basna parxa Ra natra mildina vanne suneko xu ho ki hoina asko barema zanna pako vaya hunthiyo gurudev.